Caleemo Saarka (Suldaan Xusseen Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi) – Codka Qaranka Tanadland
Codka Umadda Karaamaysan Ee QarankaTanadland. Warbaahinta Tanadland, By: Saxardiid.
Xafladda ninka xiriirinaya waa dhakhtar caan ah oo dalka mudo dheer ka soo shaqeeyey, Mideeda kalana waa nin ganacsade ah oo kamid ah saamileyda iskaashatada iska leh (German Medical Center) iyo isbitaalka (Madina Hospital). Waxaana iskaashatada saamileyda ee shirkadda madax u ah (Dr. Aadan Ugaas Maxamed Ugaas Cali). Wuxuu kaloo (Dr. Beyle) leeyahay shirkad “Wholesaler” ah waxaana la yiraahdaa (Dr. Cabdifitaax Warsame Maxamed “Bayle”). Maalintii isniinta ahayd ee ay taariikhda ferenjigu ahayd (12/08/2012) waxaa magaalada nairobi ka dhacday xaflad balaaran oo aad u qiimo badan, Xafladdaas oo ay ka soo qaybgaleen wufuud iyo martisharaf kaladuwan oo isugujira qaybaha kaladuwan ee ay bulshadu ka koobantahay oo dhan. Waxaa iyaguna ka soo qaybgalay martisharaf ka kalasocota isimada jubaland.
Madashaas qiimaha badan waxaa lagu caleemasaaray suldaanka cusub ee reer Tanadland ee jubaland, Ustaad (Suldaan Xassan Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi). Hadaba bal intaanan Ustaad (Suldaan Xassan Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi) aanan gudogelin caleemasaarkiisa, Waxaan rabaa in aan faah-faahin kooban idinkasiiyo taariikhda qoyska (Reer Suldaan Aw-Cilmi), Oo ah qoyska saldanadda reer Tanadland ee waamo soo haynjirey.
Madashaas qiimaha badan waxaa lagu caleemasaaray suldaanka cusub ee reer Tanadland ee jubaland, Ustaad (Suldaan Xassan Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi).— By: Saxardiid, ETF
Saldanadda reer Tanadland ee waamo sidaad ogsoontihiin, Waxaa mudo gaaban oo lix sanaddood gudahood ah isaga kaladanbeeyey 3 nin oo walaalo ah. Taariikdu markii ay ahayd (24/10/2006) waxay tii’alle u timid oo u rabi oofsaday, Rabi janadii ha’inoo geeyee (Suldaan Cumar Suldaan Xaaji Maxamuud Suldaan Aw-Cilmi). In mudo ah kadib waxaa xilka saldanadda loo doortay da’dii ku xigtey Suldaanka oo ahaa (Suldaan Xusseen), Waxaana lagu caleemosaaray (Suldaan Xusseen) magaalada kismaayo taariikhdu markii ay ahayd (27/02/2007).
Sawirka Suldaan Yuusuf Suldaan Cali “Sokor” oo Suldaan Xasan caleemasaaraya una ducaynaya, Suldaan Yuusuf waa isimka ugu miisaankaweyn isimada gobolada jubooyinka iyo degaamada NFD, Mideeda kalana waa wakiilka ugaaska guud ee beelaha ogaadeen (Ugaas Maxamed Ugaas Duulane Ugaas Xaashi).
[Ninka da’ada yar ee uu sawirkiisu kor ka muuqdo waa (G. Sare/Suldaan Xassan), Ninka odayga ah ee u sawirkiisu hoos ka muuqdana waa AUN. Suldaan Xusseen] Maalintii isniinta ahayd ee ay taariikhda ferenjigu ahayd (12/08/2012) waxaa magaalada nairobi ka dhacday xaflad balaaran oo aad u qiimo badan, Xafladdaas oo ay ka soo qaybgaleen wufuud iyo martisharaf kaladuwan oo isugujira qaybaha kaladuwan ee ay bulshadu ka koobantahay oo dhan.
Waxaa iyaguna ka soo qaybgalay martisharaf ka kalasocota isimada jubaland. Madashaas qiimaha badan waxaa lagu caleemasaaray suldaanka cusub ee reer Tanadland ee jubaland, Ustaad (Suldaan Xassan Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi).
Hadaba bal intaanan ustaad (Suldaan Xassan Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi) caleemasaarkiisa aanan gudogelin, Waxaan rabaa in aan faah-faahin kooban idinkasiiyo taariikhda qoyska (Reer Suldaan Aw-Cilmi),
Oo ah qoyska saldanadda reer Tanadland ee waamo soo haynjirey.
(Xusseen Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi) oo ahaa nin ay da’aaddiisu qiyaas ahaan ay 75 ilaa iyo 80 jir ahayd, Isagana rabi jano iyo raxmad ha siiyee wuxuu ku xijaabtey magaalada kismaayo sanadkaan aynu ku jiro horaantiisii.
Teeda kale, (Suldaan Xasan) waa nin caan ah oo ay beeshu uga baratay dadaal iyo waxqabad. Waana nin aad u qiimobadan oo ay umaddiisu nasiib u heshay waqtigan xasaasiga ah inuu hogaamiyo. Qoyska (Reer Suldaan Aw-Cilmi) waa qoys hoodo u leh inay ka dhashaan indheergarad waxtarbadan oo la mahadsho, Umadda karaamaysan ee reer Tandland-na ay u ogsoontahay ugana abaal hayso wixii ay u galeen, Mudadii labada boqol oo sanaddood ahayd ee ay hogaanka dhaqanka umadda reer Tanadland ee Jubaland ay ahaayeen.
Qofka aan bulshada hab dhaqan iyo dhaqaale ugu xirayn oo aan wax la wadaagin waa bilaash, Qof kasta oo bulshada kamid ahna waxa lagu qaderiyaa hadba heerga uu gaarsiisanyahay waxqabadkiisu. Hogaamiyena waxtarkiisa ugu weyni waa sahalka uu umadda u jiheynkaro uu hogaamiyaha u yahay.
Labada isimba waxay isaga midyihiin dhiirigelinta kobcinta santuuqyada dhaqaale ee beelaha, Iyo mideynta qaybaha kaladuwan ee bulshada. Hadaba si ay ufulaan himilooyinka isimada reer Tanadland, Sow waajib ma ah qofkasta oo reer Tanadland ah in uu joogteeyo bixinta qaraamaha santuuqa horumarinta ee bulshada reer Tanadland?. Iyo guud ahaan hurumarinta iyo maalgelinta dalka iyo dadka.
Salaadiinta Iyo wakiilada beelaha Jubaland ee ka soo qaybgalay shirka caleemosaarka (Suldaan Xassan Suldaan Xaaji maxamuud Suldaan Aw-Cilmi).
1. Suldaan Abrone Cismaan (Reer Shambare/Jareerweyn) oo ah beel miisaan weyn ku leh degaamada Jubaland, Qaasatan gobolada jubada hoose iyo jubada dhexe.
2. Suldaan faarax Maxamed Cawad (Beesha Ciise-Daarood).
3. Suldaan Yuusuf Suldaan Cali “Sokor” (Ogaadeen).
4. Wakiilka Ugaaska (Mareexaan) Axmed Maxamuud Magan.
5. Wakiilka Ugaaska Tanade (Dr. Aadan Ugaas Maxamed Ugaas Cali).
6. Suldaan Muuse Xuseen Cabdi (Biyomaal).
7. Suldaan Cabdiraxmaan Shiikh Xuseen (Sheekhaal)
8. Islow Maxamed Macalin, Gudoomiyaha dhaqanka beesha (Gaaljecel).
9. Islow Garaad Siyaad, Wakiilka ugaaska beesha (Xawaadle) [Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble].
10. Ugaas Maxamuud Ugaas Xuseen Baqow (Dhulbahante).
11. Beeldaaje Cali Siciid Cawl (Cali-Saleebaan).
12. Garaad Cali Aar (Warsangali).
Wufuuda shirka ka soo qaybgashay waxaa kamid ah shiikha muftiga ah ee caanka ah (Sh. C/raxmaan Sh. Cumar), Oo ah Imaamka Masaajidka Abubakar iyo gudoonka sare ee imaamyada noorad Amarica. Dhanka bidixda ka fadhiya Suldaan Xasan sawirka sadexaad ee ugu koreeya sawirada. iyo weriyaha ruugcadaaga ah ee (Weriye Xasan Ciise Cali Kuuriya).